Manchester United oo dharbaaxo xoog leh bisha Janaayo la damacsan Kooxda Juventus – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Manchester(SONNA)-Manchester United ayaa qorsheyneysa inay ka yaabsato kooxda reer Talyaani ee Juventus, maadaama ay dooneyso inay u dhaqaaqdo saxiix cusub inta lagu gudi jiro xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay wargeyska “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga, kooxaha Manchester United iyo Juventus ayaa ku dagaalami doono adeega xiddiga naadiga Lyon ee Moussa Dembélé.
Wargeyskan reer Talyaani ayaa wuxuu tilmaamayaa in maamulka Red Devils ay go’aansadeen inay bixiyaan qiimo dhan 60 milyan euro si ay u soo gabagabeeyaan heshiiska Moussa Dembélé, taasoo laga yaabo inay ku garaacdo kooxda Juventus oo dhankooda xiiso balaaran ka muujinaya adeega xiddigan.
United-ka ayaa u baahan inay la soo saxiixato weeraryahano cusub bartamaha xilli ciyaareedkan, maadaama ay dooneyso inay ka dhigato badelka xiddigaha Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez oo suuqii xagaaga la soo dhaafay kaga biiray Inter Milan.
Si kastaba ha noqotee, kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa laga yaabaa inaysan u baahnayn inay la soo saxiixato weeraryahano cusub ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkaan, sababa la xiriira inay heysato xiddigaha Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala iyo Cristiano Ronaldo.